Sonke uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwazi ukuthi imithi ukuyisebenzisa udambise isifo. Kodwa aligcini ngokuphendula lo Iqiniso liwukuthi olubaluleke eside ekwelapheni izifo ezihlukahlukene. Indlela ukuthola umthamo ngqo imithi? Yilowo mbuzo main ukuthi akubona bonke uyazi impendulo ngqo. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba, isibonelo, umzimba wengane ayikwazi ngokwanele ukuphendula engayitholi ngokweqile umuthi.
Uyini umthamo zomuthi?
Okokuqala, kufanele siqonde ukuthi imithi. Lawa izidakamizwa ukuthi somuntu ofaka isicelo nokwelashwa kwezifo ezihlukahlukene. Kuye injongo izidakamizwa, kungase eyatholakala kusukela isilwane ezicutshini futhi kwezitho, yemifino kanye nokumbiwa.
Lokhu kunengxenye ekwenzeni nokwenziwa kangcono ke emzimbeni womuntu. Izidakamizwa ekhiqizwa ngezindlela ezihlukahlukene: amaphilisi, Syrups, isithako nomuthi, izixazululo, nezinye izinketho. Kunezinhlobo eziningana izidakamizwa: injongo Jikelele (isifo belashwa nsuku zonke, ngokwesibonelo, amagciwane umkhuhlane), eqinile (esetshenziselwa nokuvinjelwa kwezifo ezinkulu, njengalezo isithuthwane), anobuthi (isib ekwelapheni izinhlobo ezahlukene izimila).
izidakamizwa ngamunye uye njalo unamathisele Umhlahlandlela, okuyinto ngokucacile umthamo zomuthi, yokwamukela ofuna ukuqala. Yiqiniso, ngezinye izikhathi odokotela ukubhala ukusetshenziswa enemithi, ezingafani eziyalezweni zakhe. Futhi kungenzeka, ngoba udokotela owazi ngaphezu izimpawu zokugula yakho, isisindo sakho kanye nobudala, futhi ngenxa yalokho, linqume ngokunembile ukwelashwa.
Emagama lasetjentisiwe phakathi nokufaka Isikali isimo sanoma imuphi izidakamizwa
Umthamo zomuthi - kuba, eqinisweni, injongo lemali yabo abayabelwe (umthamo, uma kuziwa amaphilisi, Syrups, isithako nomuthi, njll) noma emakamu oyifunayo (lapho sikhuluma ephefumula, okusho ukuthi kungenzeka ukuba uhlanganise imithi necebo ethize).
Ezimweni eziningi, odokotela abonisa izingxenye imithi iyunithi amagremu noma angu (micrograms nokuningi). Uma ungazi kanjani ukuthola umthamo ngqo imithi, kufanele sinake imiqondo elandelako:
Yiqiniso umthamo: Inani izidakamizwa okumele kuthathwe ngesikhathi esithile, balahle zonke izimpawu isifo (isibonelo, izinga ngokuvamile 3, 5, 10, 14, 21 izinsuku noma izinyanga ezimbalwa - ke kuncike izidakamizwa). Lokhu kubaluleke kakhulu uma ukuphuza imithi elwa namagciwane, kwazise abangemaJuda ukuhambisana izinga lokushintshisana umthamo ngokusebenzisa kwawo kuholela yokuthi umzimba okhula amasosha omzimba kukho, futhi akukho inzuzo ekwelapheni, bangeke bakwenze;
umthamo zokwelapha, isb inani izidakamizwa lapho, ngokukadokotela, kuzoholela babuyele ngokugcwele esigulini;
Isikali nsuku zonke - nenani izidakamizwa ukuthi kufanele kudliwe zingakapheli ngosuku (amahora angu-24);
umthamo owodwa: liphansi zokwelapha lapho isiguli ziphuze ngesikhathi esifanayo.
Kubalulekile wazi ukuthi kukhona lwati loluphatselene umthamo owodwa Isikali ziqhubeka zithuthuka nsuku zonke, ngemva eyamukelayo okuyinto umuntu ngeke nemiphumela engemihle. Okulandelayo imithamo oqabulayo izidakamizwa:
Ubuningi: ungaba emzimbeni engelapheki mathonya alimazayo ziholele ekufeni;
Kusho: umehluko phakathi esiphezulu kanye esincane;
• Linanincane lesikhatsi: umthamo lingaphansi kunalokhu okujwayelekile, okuyinto ngeke ibe nanoma imuphi umthelela lesi sifo.
Indlela ukukala umthamo umuthi?
Ngokuvamile abantu bazibuze mayelana nendlela ukubala umthamo zomuthi, kokuba ngakwesokunene izindlela ngakwesokunene (nezinkezo, amakopi wokumeda). Kukhona olwamukelwa izinyathelo ivolumu balokho okusamanzi okungaphathwa ingasetshenziswa kulokhu:
- 1 ingilazi faceted - 200 ml (40 kuhlanganisa isipuni dessert nezinkezo 20, 16 wezipuni);
- 1 tbsp - 15 ml (3 kuhlanganisa ithisipuni);
- 1 isipuni - 10 ml (kuhlanganisa 2 tsp);
- 1 tsp - 5 ml (umthamo kulencane ntathu).
Umthamo izidakamizwa kungenziwa ngendlela efanele ibalwa ngokusebenzisa amathuluzi beze iqoqo izidakamizwa, isibonelo: inkomishi wokulinganisa, isipetu nokushintsha kokudla nokufakwa pipette dispenser, spoon dispenser.
Abakwazi kalula ngiyolinganisa edingekayo ketshezi imithi, noma uthele oyifunayo powder zokwelapha. dispensers okunjalo ngokuvamile usetshenziselwa ukwenza ikhaya self-ukwelashwa. Ngokuvamile, ayakwazi ukuxoxa ulinganise ejenti zokwelapha ewuketshezi ku uhla kusuka 2.5 ml kuya 60 ml. Yiqiniso, ezibhedlela kuwusizo kakhudlwana kuyinto ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwezinye izinhlobo (isib uketshezi - nge IV), isb lapho odokotela kalula umkhondo ngesilinganiso izidakamizwa abaphathi, ukumuncwa yayo indikimba esiguli, futhi Yiqiniso, umphumela ukwelashwa abafanele.
Kungakanani izidakamizwa kuyingxenye isixazululo noma tincture?
Ukuze siphendule lo mbuzo obonakala ulula kanjani ukuthola umthamo esiqondile izidakamizwa, kubalulekile ukwenza ukubala alandelayo:
Ngokuvamile, imithi liquid kuthathwe azithathe usebenzisa isipuni ezivamile, ivolumu zazo, njengoba kuboniswe ngenhla, 5 ml. Ngokwesibonelo, udokotela ekunika nawe umuthi ngesimo isiraphu. Ngezinye kwikhava yawo wabonisa ukuhlobana elandelayo, okuyinto kwesinye isikhathi kuyaye kuvuse zonke ubuyophazamiseka: 15 mg / 5 ml. Kulula: kusho ukuthi 1 tsp imithi sizoqukatha 15 mg le isiraphu. Uma umthamo owodwa we imithi ngokuqondile wena ithi 45 mg, kusho ukuthi kufanele uphuze ukuze 1 reception 3 tsp isiraphu.
Ngezikhathi ezithile, abakhiqizi ucacise, njengoba isakhi esiyinhloko esebenzayo ye imithi liquid eziqukethwe wawuqeda wonke lo mqulu, isib, isiraphu. Ngokwesibonelo, iphakethe ibonisa ukuthi imfuyo esebenzayo 60 mg futhi umthamo isamba 120 ml. Sikholelwa, njengoba izobe iqukethwe 1 ml: 60 mg / 120 ml = 0.5 mg / 1 ml. Uma amathisipuni 1 Iqukethe 5 ml: 5 ml x 0.5 mg / ml = 2.5 mg izidakamizwa esebenzayo 1 tsp Kulesi sisekelo, silindele siqu umthamo wansuku zonke imithi.
Ngokuvamile ukuthi iphakethe kwezidakamizwa ukhombise isilinganiso isithako esisebenzayo mg 100 noma 100 ml. Bala lapha adingekayo, njengoba kuboniswe ngenhla.
Esithinta umthamo imithi?
Ithebula imithi umthamo (ngamanye amazwi, lonke umthamo kolwazi izidakamizwa) ngokuvamile kuhlanganisa yobudala lesiguli, isisindo, ubulili ngezikhathi.
Okubaluleke kakhulu, isazi abanekhono, acabangele zonke izici ezithinta yokwamukela umuthi:
ngobudala nobulili isiguli;
khona noma ukungabi isifo esingelapheki;
ethola noma awutholi neminye imithi kanye izindlela nelinganikezelwa;
kobukhulu kanye nesikhathi ukugula.
Noma ubani angabona ukuthi umuntu nge isisindo ongaphakeme kudinga umthamo ezincane zomuthi kuqhathaniswa indoda ka umthamo omkhulu. Noma, ngokwesibonelo, amadoda abe umzimba ezikhethekile, ngakho umthamo ngabo kuvamise ephakeme kunaleyo for abesifazane. Yingakho imiyalelo izidakamizwa aveza umthamo kwelapha udokotela naye wakwazi ukucacisa lemali edingekayo izidakamizwa, wena ngqo.
Ukubalwa umthamo izidakamizwa izingane
Umthamo izidakamizwa e Pediatrics - ngempela evusa impikiswano. Abanye odokotela batusa i-ke ukubala ngesisekelo umthamo ofanayo kwezidakamizwa omdala. Kodwa abantu abaningi bavame ukuba uthemba uhlelo, ngoba mass wengane lincane kakhulu omdala, futhi umzimba kwalokhu isheshe. Odokotela bathi emizimbeni ezikhulayo bazwelane kakhudlwana zonke izinhlobo mithi. Ngokwesibonelo, izingane musa bathambekele ukusebenzisa utshwala, izidakamizwa, i-nicotine, ngokuvamile ingxenye izidakamizwa. Yebo, kanye nomthelela yabo engalungile Into ephawuleka kakhulu waba nomzimba omncane. Ngakho-ke, izidakamizwa umthamo izingane ibalwa ngesisekelo idatha isisindo ingane umzimba (1 kg) ye surface body endaweni (1 m), inani iminyaka yokuphila kwakhe.
Kufanele kuqondwe ukuthi impendulo imithi efanayo ezinganeni ezahlukene kungaba ngempela engalingani. Konke kuncike nezici ezithile wengane zofuzo ngokwemvelo kulesi sifo, khona izifo zakhe ezingamahlalakhona nokuningi. Ngokuvamile ukuphumelela izidakamizwa kulawulwa ngincipha noma ngokwandisa umthamo. abazali Abangenalwazi ukwazi ukuthi indlela yabo yokuphathwa (temlomo, rectal, esicutshini, ongama, ngomjovo), futhi, kunomthelela oqonde ngqo phezu ukusebenza kahle. Ingxenye yimuphi izidakamizwa izingane ngokuvamile ibalwa ngezindlela ezimbili ethize:
esekelwe isisindo ingane: esekelwe 1 kg;
okusekelwe yobudala kwengane: iminyaka kubonakala (ngaphambi noma ngemva iyiphi konyaka, ungakwazi ukunikeza ingane yakho imithi).
Uma usebenzisa izidakamizwa ukuthi ayatholakala abadala, kusekelwe isidingo sengane ukuthobela umthamo, okuyinto ethulwa ngefomu isifinyezo. ithebula izidakamizwa umthamo:
Ubudala wengane I share izidakamizwa maqondana umthamo omdala
izinyanga 6. 1/10 - 1/8
ezingu-6. - ezingu-12. 1/8 - 1/7
ezingu-12. - izinyanga 24. 1/7 - 1/6
izinyanga 24. iminyaka engu-3 1/6 - 1/5
3-4 iminyaka 1/5 - 1/4
iminyaka 4-6 1/4 - 1/3
6-8 iminyaka 1/3 - 1/2
iminyaka 8-10 1/2 - 3/4
iminyaka 10-14 3/4 - 5/6
iminyaka 14-18 5/6 - 1
Yiqiniso, kungcono kakhulu ekwelapheni ingane ukuze isebenzise izidakamizwa, ekhiqizwa ngokuqondile izingane ezincane. Okokuqala, abakhiqizi, esikhiqiza ngokunembile le mithi, bagcine izimfuneko izinga okuningi. Okwesibili, khetha futhi wenze umthamo efanele kwezidakamizwa, isibonelo, kusukela amaphilisi afanayo omdala kunzima kakhulu. Ngezinye izikhathi ketshezi asebenzayo kukhona okungaphezu empeleni kudingeka for ekwelapheni izifo ingane.
Ukubalwa umthamo izidakamizwa abadala
Ngomqondo onabile, nemithi abadala kumele kuthathwe ngesisekelo lawo mazwi, okuyinto efakwe kuyo. Into esemqoka kuleli cala - ukuba bagcine imithetho elandelayo hhayi kuwo:
ukulandela ngokucophelela oda likadokotela, hhayi ukuzithiba medicate;
ngokuyinhloko kubalulekile efanele ukubala eyodwa, umthamo wansuku zonke nenkambo yimuphi izidakamizwa, esekelwe isisindo futhi ubulili omdala;
ukuthenga imithi kuphela ezindaweni ezicwaningiwe, hhayi ukuthenga mbumbulu.
Khumbula ukuthi noma izidakamizwa - ke, ngaphezu kwakho konke, ekhuthaza ikhemikhali kungaletha inzuzo yakho impilo, hhayi kuphela ngesimo yokutakula, kodwa futhi kubangele umonakalo ebalulekile uma kabi esandleni sakhe.
Recipe enikeziwe emithini: Ingabe siyamdinga ke?
Indlela ukuthola umthamo esiqondile izidakamizwa, uyisebenzisa okokuqala? Lokhu kuzosiza ngokuqinisekile iresiphi ukuthi ngokuvamile enamathiselwe ukulungiselela ngasinye. Lapho, ngaphezu izakhiwo zokwelapha zomuthi, iqukethe olulodwa, umthamo wansuku zonke, futhi umthamo Inkambo yokwelashwa ngalinye. Lungisa imithi kuthinta ubude kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo ekululameni kwesiguli. Kubalulekile ukwazi ukuthi ngezinye izikhathi odokotela siyibukele phansi umthamo Yiqiniso isidakamizwa. Phezu ukuthola ukungafani okunjalo ekumisweni uchwepheshe futhi iresiphi exhunywe izidakamizwa, kubalulekile ukubuza umbuzo ohambisana kuye. Ngoba ngokuvamile izidakamizwa ulapha incike isisindo somzimba, khona izifo zakhe okungamahlalakhona, ubudala, njll Futhi umsebenzi udokotela kuleli cala - ukuba kahle ukubhekana naso.
Futhi nebulizer Isikali nemithi nalokho
Kuyaziwa ukuthi inqubekela-phambili yesayensi akemi namanje, futhi muva nje waziwa kudivayisi kakhulu ekwelapheni ngalo ingaphakathi acinene nezifo emphinjeni ezinganeni nakubantu abadala - a nebulizer.
Njengoba kuphawuliwe iziguli ngokwabo, imiphumela yokwelashwa nale divayisi esihle nje: okokuqala, kudingeka isikhathi esincane ukuze ekugcineni balahle izimpawu zesifo wena; Okwesibili, ingabe uchitha ku inqubo yokwelapha imali kakhulu.
khumbula nje, kudingeka ukuzithiba medicate wena awalwi lapha, imithi kanye imithamo ngenxa nebuliser kufanele liqoke udokotela abanolwazi. ngencazelo yalo okulandelayo: Umama utsela esitsheni akhethekile ukulungiselela kunesidingo ngokuxuba ke ngezabelo ezithile, nge brine, uphefumulele umusi kwakhiwa (okuyinto adalwe ukusebenza kwe-compressor noma ultrasound). Kanjalo izidakamizwa abelwa emphinjeni noma acinene umgodi futhi kuye kwaba nomphumela omuhle ekwelashweni kwabo. Kubalulekile ukwazi imithi kanye imithamo ngenxa nebulizer, ezisetshenziswa amadivayisi yesimanje:
- i-sodium chloride (wasebenzisa izidakamizwa kuphela kuphela);
- isixazululo "Berodual" (yandisa bronchi);
- ukumiswa "Pulmicort" (bome ulwelwesi lwamafinyila ikhala nge ikhanda strong abandayo);
- isixazululo utshwala hlorfillipta: aqede ukhwehlela futhi phlegm display.
Izidakamizwa asetshenziswe nebulizers yesimanje, kakhulu. Kubalulekile ukuqonda ukuthi yini umthamo izidakamizwa ngenjongo ephefumula kuyadingeka endabeni ethile.
Overdose izidakamizwa - noma ukuphila kwakho engozini?
Kufanele kuqashelwe ukuthi izimo ezinjalo zenzeka ngempela njalo ekuphileni kwansuku zonke. Abantu abangafuni ufunde imiyalelo, thatha, njengoba kubonakala, lemali evamile umuthi othize. Zagijima ngokushesha ukuzwa lezi zimpawu ezilandelayo: isicanucanu, isiyezi, ikhanda elibuhlungu, okungalindelekile imisipha.
Konke lokhu kungaholela ekufeni. Ukuze kuxazululwe le nkinga ngesikhathi esifushane, kunesidingo esiphuthumayo ntombazane ukuhlanza, lavage esiswini, kanti isiguli ukufuna usizo endaweni isikhungo sezokwelapha. Kuyilapho wena kokulinda i-ambulensi, baphuze itiye elimnyama eqinile, hhayi ubisi, lokho kungase kubangele umphumela aqinile ukudakwa. Ukuze ugweme izimo ezinjalo, kudingeka siqonde ukuthi siphathelene Isikali izidakamizwa, futhi kuphoqelekile ukuhambisana.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi usebenzisa imithi ethile usebenzisa izinhlobo ezithile zamakhemikhali, engabangela umonakalo enkulu ngaphezu izinzuzo. Kusukela lapho ngisho ubuncane ukweqisa izidakamizwa yabo they jikisa kwaba yisihlungu, okungase kube nemiphumela emibi kakhulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene seziguli ezisencane ngoba izimpilo zabo banesibopho wokuqala nomkhulu kunabo bonke abazali bazo. Ngakho-ke kuyadingeka ngaphambi kokuthatha izidakamizwa ethile (ikakhulukazi uma kuziwa ezinganeni), bonana nodokotela wakho kuqala ukubala umthamo efanele ke futhi noma kunjalo ukuba angaphambuki kwaleli nani.
Indlela ukupheka ujamu cherry